टीका थाप्‍नेलाई मात्र होइन, लगाइदिनेलाई पनि हुन सक्छ एलर्जी | NepalDut
टीका थाप्‍नेलाई मात्र होइन, लगाइदिनेलाई पनि हुन सक्छ एलर्जी
डा. सविना भट्टराई .
मान्यजनबाट टीका थाप्ने र आर्शीवाद लिएर मनाउने पर्व हो दसैं । तर दसैंमा लगाएको टीकामा प्रयोग हुने रङले हामीलाई एलर्जी देखिने गरेको छ । टीका लगाएको स्थानमा चिलाउने हुन्छ वा रातो भएर फोका आउँछ ।
यदि त्यस्तो समस्या आउने भएमा टीकामा प्रयोग गरिएको रंगको एलर्जी भएको हुनसक्छ । टीकामा हामीले कस्तो रङ्हरु प्रयोग गरिरहेका छौँ । हामीले टीका बनाउन प्रयोग गर्ने रंगले एलर्जी गराउने हुन्छ ।
पहिला–पहिला प्राकृतिक रङहरु बनाएर प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो । जसले एलर्जी समेत हुँदैन थियो । तर अहिले त्यस्ता प्राकृतिक रङ्हरु सम्भव पनि हुँदैनन् । बजारमा पाइने रङ्हरुमा रसायनिक मिसावटले हाम्रो छालालाई असर गर्ने गर्छ । टीका लगाएको स्थान वरिपरि रातो हुने, चिलाउने र सुन्निने आदि समस्या समेत देखिने हुन्छ ।
कतिपयमा मानिसहरुलाई निधारमा लगाएको टीकाको एलर्जीले अनुहार नै पूरै सुन्निएको अस्पतालमा उपचारका क्रममासमेत गएको देखिन्छ । विशेष गरेर टीकाको एलर्जी बढी बबालबालिका र गर्भवती महिलाहरुमा देखिन्छ ।
यदि एक पटक टीकाको एलर्जी देखिएको छ भने तुरुन्तै टीका पुछेर चिसो पानीले सेकेर मोस्चराइजर लगाउनुपर्छ । जसले एलर्जी कम गर्न सकिन्छ । हामीले टीका लगाएको स्थानमा चिलाइरहेको छ । तर टीका हटाएनौँ भने एलर्जीले पूरै अनुहारसमेत बिर्गान सक्छ ।
टीका लगाउँदा प्रयोग गरिने रंगले दुई प्रकारको एलर्जी गराउने गर्छ । एलर्जी कन्ट्याक ड्रमाटाईटिस (एसीबी) र इरिटेन कन्ट्याक ड्रमाटाईटिस रहेका छन् ।
एलर्जी कन्ट्याक ड्रमाटाईटिस पहिला पनि एलर्जी भएको मानिसलाई अर्कोपटक टीका लगाउने बित्तिकै तुरुन्तै देखिने हुन्छ । इरिटेन क्न्ट्याक ड्रमाटाइटिस भनेको पहिला कहिल्यै देखिएको थिएन तर यसपटक टीका लगाउने बित्तिकै हुने एलर्जीलाई बुझिन्छ ।
यदि टीका लगाएको स्थानमा फोका आएमा तुरुन्त छाला रोग विशेषज्ञसँग परार्मश लिनुपर्ने हुन्छ । टीका थाप्नेलाई मात्र होइन टीका लगाइदिने मानिसलाई समेत एलर्जी हुने गरेको छ । टीका लगाइदिने मानिसहरुलाई समेत रंगले औँलाहरु फुट्ने सुख्खा हुने र पोल्ने दुख्ने समेत हुन्छ ।
त्यस्तो समस्या आउन नदिन टीका लगाई सकेर तुरुन्तै चिसो पानीले हात धोएर मोस्चराइजर लगाउनुपर्छ । जसले एलर्जीको समस्या आउदैन् । त्यस बाहेक लामो समयसम्म अन्य छालामा समेत परेमा त्यो स्थानमा एलर्जी देखिने गर्छ ।
कतिपय दसैंपछि टीका लगाएको स्थानमा आएको पानीको फोकाको समस्या लिएर बिरामीहरु आउनु हुन्छ । छालाको कुनै पनि समस्या नभएकाहरुले लामो समयसम्म टीका निधारमा राख्नु हँदैन् ।
हामीहरु अझ रातो गाढा रङहरु प्रयोग गरेर टीका बनाउँछौ तर जति गाढा र रातो रङ हुन्छ । त्यसमा त्यति नै बढी रसायन हुने हुँदा त्यो रसायनले हाम्रो छालामा असर गर्ने गर्छ ।
(छाला रोग विशेषज्ञ डा. भट्टराई काठमाडौं मेडिकल कलेजमा कार्यरत हुनुहुन्छ )